प्रिय विद्यार्थी !! सुन त । – DeviRam Acharya
By Deviram Acharya	 On १६ बैशाख २०७८, बिहीबार १०:४८
मेरा प्रिय विद्यार्थी,
अहिले फेरि गत वर्ष जस्तै विद्यालयहरू बन्द हुँदै छन् । तिमीहरू आ-आफ्नो घरमै सीमित भएर बस्नु पर्ने बाध्यतामा छौ । आफ्नो र आफ्नाको जीवन रक्षाका खातिर यही बाध्यतालाई सहज पनि स्वीकार गर्नु नै पर्ने छ । गत वर्षको भन्दा नयाँ स्वरूप (भेरियन्ट) मा कोरोना सङ्क्रमण फैलँदै गइरहेको र यसले धेरैको ज्यान नै जोखिममा पर्ने खतरा रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएका समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन् ।
स्वयम् सङ्क्रमितहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्नो सम्पर्कमा आउनेहरूलाई परीक्षण गर्न र सचेतना अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन् ।
यी माथि उल्लेखित प्रसङ्गले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि लामै समय भौतिक दुरी कायमै नै राख्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । जसले गर्दा लामै समयावधि भौतिक रूपमा विद्यालय बन्द रहने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय नै नआएपछि; पढाइ नै नभएपछि; सिकाउने शिक्षक नै नभएपछि तिमीहरूको जान्ने बुझ्ने र सिक्ने अवसरमा केही समस्या त अवश्य नै होला । तर प्रत्यक्ष रूपमा पढाइ वा सिकाइ नहुँदैमा कुनै चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने छैन । सिकाइका वैकल्पिक बाटाहरू प्रशस्त छन्, ढोकाहरू खुला छन्, सिकाइका क्षेत्रहरू असीमित छन् । ज्ञानका स्रोत शिक्षक र विद्यालय मात्र होइनन् ।
केवल तिमीहरूमा सिकाइ प्रतिको मोह र अठोटको खाँचो छ । सिक्छु भन्ने मनन् गर्नु जरुरी छ । मात्र तिमीहरूले आफैले आफूलाई सिकाइका खातिर तयार पार्नु पर्छ । “समस्याले झन धेरै अवसर लिएर आएको हुन्छ” भन्ने आशयलाई तिमीहरूले बुझ्नु जरुरी छ । अब तिमीहरूले सिकाइका पुराना तौर तरिकालाई बदल्नु छ । कक्षामा मूर्ति बनेर शिक्षकका प्रवचन सुन्ने वानीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । शिक्षकको आदेशमा पढ्ने विधिलाई रुपान्तरण गरी स्व सिकाइमा आफूलाई ढाल्नुपर्ने छ । केवल तिमीहरूले आफै सिक्ने अनि ज्ञानको सार झिक्ने इच्छाशक्ति जागृत गराउनु पर्ने छ ।
तिमीहरूमा आफ्नै घरमा बसेर कसरी सिक्ने ? के सिक्ने ? भन्ने अन्योलता पनि भएकै होला । तर त्यसरी अन्योल अवस्थामा रहनु पर्दैन । तिमीहरूले घरमै अपनाउन सक्ने केही स्व सिकाइका उपायहरू निम्नानुसार हुन् सक्ने छन् :-
सबै भन्दा पहिला त तिमीले आफ्नै घरका दैनिक काम काजमा तल्लिन भएर लाग्ने, खाना बनाउन सिकौँ, भाडा माझ्न सिकौँ । जिन्दगी खाना नखाई चल्दैन, खाना पकाउन सिक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ ।
गाउँमा छौ भने खेतबारीको खेतीपातीमा जुट्, शहरमा छौ भने कौसी खेतीमा लाग ।
घर करेसाबारी सरसफाईमा जुट्, कोठा मिलाउ, भान्सा मिलाउ । सरसफाइ तिम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुनेछ ।
प्रत्येक दिन साँझ दिनभरिका गतिविधि समेटेर दैनिकी लेख ।
साहित्यिक पुस्तकहरू पढ् । छैनन् भने सोध खोज । माग ।
जे जस्तो हुन्छ सिर्जना गर्ने जस्तै : चित्र बनाउने, कथा कविता लेख । तिम्रो शिक्षकलाई पठाउँ । पक्कै सहयोग गर्नुहुन्छ र गर्छु ।
गणित विज्ञानसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू बनाउने जस्तै : काठका टुक्राको स्केल बनाउने,
नेटको सुबिधा हुनेहरूले अनलाइन सिकाइका लागि साथीहरूको समूह बनाउने र शिक्षकहरूसँग सम्पर्कमा रहने ।
एनसिइडीको भर्चुअल सामग्री हेर्ने । सिक्ने थलो, इकलास नेपाल, माई सेकेण्ड टिचर, ओएलइ नेपाल जस्ता वेभ एपबाट पढ्ने ।
अनलाइन नहुने तर टेलिभिजन रेडियो हुनेहरूले टिभी रेडियोमा पढाइएको विषयवस्तु हेर्ने र सुन्ने अनि टिपोट गर्ने त्यहाँ नबुझिएको विषयवस्तु टिपोट गरेर राख्ने र फोनबाट शिक्षकसँग सोध्ने वा घरकै अग्रजसँग सोध्ने
रेडियो टिभी नहुनेहरूले शिक्षकको फोन नं लिने र फोन गरेर सोध्ने । यदि फोन गरिराख्न आर्थिक बोझ हुने भए शिक्षक वा विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी गराउने र विद्यालयको फोनबाट शिक्षकले नै फोन गरेर सिकाउनु हुन भनि अनुरोध गर्ने ।
आफ्नो घर र नजिकको छिमेकमा उपलब्ध हुने माथिल्लो कक्षाका दाइ दिदीहरूसँग पढ्ने वा सिक्ने ।
एक्लै भौतिक दुरी कायम गरी विद्यालय आएर पुस्तकालयबाट पुस्तकहरू लिने र घरमा लगेर पढ्ने ।
पाठ्यपुस्तकका अभ्यासहरू गर्ने नजानेमा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्ने ।
कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू आफ्ना घर परिवारलाई सिकाउने । प्रिय विद्यार्थी, तिमीहरूले यी माथि उल्लेखित बुँदाहरूलाई मनन गर्ने छौ र सिकाइमा तत्पर रहने छौं ।
केवल तिमीहरूमा पढ्ने र सिक्ने तत्परताको खाँचो हो । यदि तिमीहरूले चाह्यौ भने सिकाइका मार्गहरू खुला छन् । तिमीहरूको भविष्य उज्ज्वल छ ।तिमीहरू सिकाइमा तत्पर होऊ । तिम्रो साथमा हामी छौं । सम्पर्कमा रहू तिम्रा सिकाइका खातिर जुनसुकै समयमा हामी सहयोग गर्न हाजिर छौं । प्रिय विद्यार्थी तिमी अघि बढ पछिबाट साथ दिने नै छौं ।
उही तिम्रो शिक्षक सुरज लम्साल जनज्योति माध्यमिक विद्यालय भिमाद-६,तनहुँ ।